Ny tabilao na ny tabilao misy ny fizarana amin'ny Game of Thrones | Famoronana an-tserasera
Game of Thrones no andian-dahatsoratra izay ny Novonoina tamin-kabibiana ny mahery fo ary isaky ny vanim-potoana dia misy mpijery an-tapitrisany maro manerantany hahafantatra izay manodidina ny Fanjakana Fito.
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia hanana eo alohanay ny vanim-potoana fahenina amin'ity andiany lehibe ity izay ananantsika vintana ankehitriny fantaro ny solaitrabe na ny solaitrabe avy amin'ny iray amin'ireo fizarany. Andiany fahasivy amin'ny vanim-potoana fahadimy no ahalalanay vintana fa manatona noho ny mpanakanto tenany, Adrien Van Viersen.
Andian-dahatsoratra mahatalanjona izay manaraka ny fanjakan'i JRR Martin mankany fantaro ny hoavin'ny Stark, Lannister na raha Daenerys dia afaka maka izay taloha ny fianakaviany, ny seza fiandrianan'ny Fanjakana Fito.
Ity tabilao na storyboard ity dia efa Narotsak'i Adrien Van Viersen ao amin'ny tranonkalany manokana. Takelaka misy tantara izay manamarika ny seho sy ny fiaramanidina rehetra ary tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ny fampahalalana ampy rehetra mba ho azo soratana ny fizarana feno. Ny mpanao sary tahaka an'i Van Viersen dia izy no miandraikitra ny fiteny sinematografika izay miandraikitra ny famolavolana ny ekipa mpamokatra sisa.
Azonao atao ny miditra amin'ny tabilao feno ao amin'ny tranonkalany avy amin'ity rohy ity. Zana-kazo iray mila teknika fanaovana sary tsara ary fahatsapana sinematografika tsara hanehoana ny script nosoratana tamin'ny sehatra mifandraika fa tsy very ny kofehy sy ny hetsika amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia misy ifandraisany betsaka amin'ny tantara an-tsary, noho izany ny mpanao sariitatra manam-pahaizana mahay hahalala ny fomba hitantanana azy.
Fotoana iray tsy manam-paharoa hahitana izay misy ao ambadik'io andiana fahitalavitra mahafinaritra io Izany dia ahafahantsika rehetra mifamatotra tsara miandry ny vanim-potoana fahenina mba hahafantarana izay hitondra antsika amin'ny Stark, Lannister ary mpilalao endri-tsoratra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ity ny tabilao an'ny iray amin'ireo fizarana amin'ny Game of Thrones